Home ၀တ္ထုတိုများ ငမိုးရိပ်ချောင်းနံဘေး နေ၀င်စောချိန်
Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့480မနေ့က846တစ်ပတ်အတွင်း480ယခင်သတင်းပတ်က10499တစ်လအတွင်း42497ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2892904Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	ငမိုးရိပ်ချောင်းနံဘေး နေ၀င်စောချိန်	Views : 3202 Favoured : 91
အချိန်က ညဉ့်သန်းခေါင်ကျော် နှစ်ချက်တီးချိန်။ “ဒေါင်… ဒေါင်… ”
နှစ်ဆယ့်ခြောက်ရပ်ကွက် ကင်းတဲဆီမှ သံချောင်းခေါက်သံက ပတ်ဝန်းကျင်ကို တခဏတာ သက်ဝင်စေပြီး ပြန်လည် တိတ်ဆိတ် သွားပြန်သည်။ ငမိုးရိပ်ချောင်းစပ် တစ်နေရာတွင်ရှိသော သမ္ဗာန် အဟောင်း တစ်ခုပေါ်မှ တချက်တချက် လှုပ်တတ်သည့် အရိပ်တစ်ခုကလွဲလို့ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးကလည်း ခြောက်ခြားဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။ ထိုအရိပ်ပိုင်ရှင်ကတော့ ရစ်ရွှေရည်ကို အဖော်ပြုနေသူ ကိုဘမောင်။
“ရွှေမေတ္တာတွေ ဖေချစ်တာတွေ သွေမပစ်ပါသလေ မေသိပါစေ… အေ့.. ”
နှောင်းခေတ်သီချင်း တစ်ပိုင်းတစ်စကို အသံသေး၊ အသံကြောင်ဖြင့် အော်ဆိုလိုက်သော ကိုဘမောင်အသံက တိတ်ဆိတ်မှုကိုထိုးခွင်းကာ စူးစူးရှရှထွက်လာတော့ ဥာဉ့်ယံက ရီဝေေ၀အသွင်ကို ဆောင်နေပြန်သည်။ အခါတိုင်းဆို အခုလို ငရှဉ့်ထောင်သောညများတွင် ကိုဘမောင်က တရေးတမော အိမ်ပြန်အိပ်နေကျပေမယ့် မိန်းမဖြစ်သူ မအေးခင်နှင့် ညနေက စကားအခြေတင်များခဲ့ကြသဖြင့် အိမ်မပြန်တော့ဘဲ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အရက်ထိုင်သောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
နားပူနားဆာလုပ်တတ်သော မအေးခင်၏ အထေ့အငေါ့စကားများကို စကားနည်းရန်စဲလုပ်ကာ အကြိမ်ကြိမ် ရှောင်ရှားခဲ့သည့်ကြားမှ သူ၏ယောက်ျားသိက္ခာကို ထိခိုက်လာသောအခါများတွင်တော့ ဒီမိန်းမကို သူတကယ်ပင် စိတ်ထဲအစာမကျေနိုင်လှသည်။ တကယ်ဆို ကိုဘမောင်ဆိုသူက တခါတလေ စိတ်ပြေလက်ပျောက် အနည်းငယ်သောက်တာကလွဲလို့ ရှာဖွေရသမျှကို အကုန်အပ်တတ်သူဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းလှတဲ့ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ ကိုဘမောင် ရှာသမျှ အရာမထင်လှတာလည်း သိပ်တော့မဆန်းလှ။ ငွေအရင်းအနှီးမစိုက်နိုင်လို့ ငရှဉ့်ထောင်သည့်ပစ္စည်းများကိုပင် ငှားပြီး အလုပ်လုပ်ရသည့် သူ့ဘ၀က များများစားစား မရတာလည်း မိန်းမဖြစ်သူ အေးခင်မက အသိ။ ရသမျှငရှဉ့်များအား သုံးပုံတစ်ပုံသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပစ္စည်းငှားဘ၀က တကယ်တော့ မစားသာလှ။ ငရှဉ့်မရသည့်ရက်များ ပစ္စည်းပျောက်ရှခဲ့ရသည့်ရက်များတွင် စားဖို့မဆိုထားနှင့် အိတ်ထဲကတောင် စိုက်ထုတ်ရသည်ကလည်း မနည်း။ “နင်နားလည်ဖို့ကောင်းတယ် အေးခင်မ… ငါ့မှာ ညကြီးမိုးချုပ် မြွေပါးကင်းပါးမကြောက် အလုပ်လုပ်နေတာ နင်တို့သားအမိအတွက်ဆိုတာ နင်သိဖို့ကောင်းတယ်။ မိန်းမများကွာ …အေ့”
မူးကလည်းမူး ညဉ့်နက်တွင် မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာလာပြန်တော့ ပုဆိုးခြုံကာကွေးနေလိုက်ပြီး အာရုံမတက်ခင်မှ ရေချိန်မကိုက်တကိုက်ဖြင့် ငရှဉ့်ထောင်ထားသည့်နေရာဆီသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ နားထဲမှာတော့ အေးခင်မ ပြောသော စကားလုံးများကို ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ကြားယောင်မိဆဲ။
“အိမ်ငှားခ မပေးနိုင်တာ ဒီလပါဆို ၃ လရှိပြီ ကိုဘမောင်။ ဒီနေ့ နေ့လည်ပဲ ဒေါ်ကြည်ပြာက ကျွန်မကို ခေါ်ပြောတယ်။ ဒီတပတ်အတွင်းမှ မပေးနိုင်ရင် ရပ်ကွက်ရုံးကတဆင့် စကားပြောမယ်တဲ့လေ။ ခုနောက်မှပြောင်းလာတဲ့ ဟိုပန်းရံသည်လင်မယားကို ကျုပ်တို့နေရာမှာ အစားထိုးမယ်ဆိုလားပဲ။ အိမ်လခကြွေးကြေလို့ တခြားနေရာ ပြောင်းချင်သည့်တိုင် ခုနေတဲ့အခန်းက ဒီရပ်ကွက်မှာ ဈေးအသက်သာဆုံး တော်ရေ”
“ပူတူးမကျောင်းက စာအုပ်ဖိုးက ဒီသောကြာနေ့ နောက်ဆုံးတဲ့ ကိုဘမောင်ရဲ့”
“ရှင့်မလဲ တနေ့တနေ့ အိပ်ချည်းပဲနေတော့တာပဲ ဟိုဘက်ခန်းက မလုံးတင်ယောက်ျားလို နေ့လည်နေ့ခင်း အလုပ်ကလေးဘာလေးများ ထွက်ရှာပါတော့လား။ ည ညဆိုလည်း ငရှဉ့် ထောင်တယ်ဆိုပြီး အရက်ကလေးတမြမြနဲ့ ကျုပ်မှာ ရှင့်အရက်ဖိုး လိုက်ရှင်းရတာကိုက မနည်းလှဘူး”
“ငမိုးရိပ်အပေါင်ဆိုင်က ကျွန်မ နားကပ်ကလေးကို ပြန်မရွေးနိုင်တောင် အတိုးတော့ပေးနိုင်အောင် လုပ်စမ်းပါ ကိုဘမောင်ရယ်။ ကျွန်မ အမေပေးခဲ့တဲ့ အမွေက ဒီတစ်ခုပဲ ကျန်တော့တယ် မဟုတ်လား” “…………………………………………….”
“ကျွန်မကို မကြည်ဖြူရင်တောင် တော့်သမီးကိုတော့ သဒ္ဓါသင့်ပါတယ် ကိုဘမောင်ရယ်..။ ပူတူးမက ကျောင်းအကျီတစ်ထည်နဲ့ ကျောင်းဆင်းတိုင်း မိုးရွှဲတာလည်း များပြီရှင့်။ အသစ်ချက်ချွတ်ဝယ်ပေးဖို့ မဆိုလိုပါဘူးတော်။ စံပြဈေးဘေးက တပတ်ရစ် တစ်ထည်လောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ တော့်သမီးက ချေးများတာမှမဟုတ်တာ"
သမီးလေး ပူတူးမ။ ပူတူးမအကြောင်းကို တချက်လေး တွေးမိလိုက်တာနဲ့ အဖိုးတန်ရတနာတစ်ခုကို တမြတ်တနိုး ထွေးပိုက်ထားရသလို သူခံစားလိုက်ရသည်။ ကိုဘမောင်အဖို့ ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါးသည်သာမက သားသမီးကလည်း ရှားရှားပါးပါး ဒီသမီးလေး တစ်ယောက်သာရှိသည် မဟုတ်လား။ အပိုစကားရယ်လို့မဆိုတတ်သော ကိုဘမောင်က သမီးနှင့် လက်ပွန်းတတီး မရင်းနှီးသည့်တိုင် ရင်ထဲက သည်းသည်းလှုပ်ချစ်မိတာ အမှန်။ ပူတူးမကတော့ သူ့အမေ မအေးခင်နှင့်သာ တစ်ချိန်လုံးတွတ်ထိုးလို့ နေတတ်ပြီး သူမ လိုချင်သည့်အရာများကိုပင် မိခင်မှတဆင့် သူ့အားပြောတတ်သည်မှာ ကိုဘမောင်တို့ မိသားစု၏ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလိုပင် ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။
ပူတူးမကလည်း အများတကာကလေးတွေလို ထူးထူးထွေထွေ ပူဆာတတ်သူ မဟုတ်။ အစားအသောက်ဆိုလည်း ဘယ်တော့မှချေးများတတ်တဲ့ ကလေးမဟုတ်လေတော့ အာဟာရရယ်လို့ ထူးထူးထွေထွေမကျွေးနိုင်သည့်တိုင် ပူတူးမက ၀၀ကစ်ကစ်လေးဖြစ်နေကာ မိုးရွာမရှောင် နေပူမရှောင် တာတေလန်အောင် ဆော့တတ်ပြန်တော့ ခွေးပေါက်စကလေးနဲ့တောင် တူနေသေးဟု ဘမောင် တခါတလေ ထင်မိသေးသည်။ “ငါ့သမီး ကျောင်းစရိတ်ကာအောင် ငရှဥ့်များများမိမှဖြစ်မယ်။ ငါစာမသင်ခဲ့ရပေမယ့် ငါ့သမီးကိုတော့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင် ငါကြိုးစားရမယ်” မျှော်လင့်ချက်တို့ဖြင့် ကိုဘမောင် ငရှဉ့်တောင်းများကို တစ်တောင်းပြီးတစ်တောင်း ဆွဲသိမ်းကာ ဓါတ်မီးမှိန်မှိန်ဖြင့် လိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ ငရှဉ့်တောင်းတွေက ဗလာဖြစ်နေသလို ကိုဘမောင်ရင်ထဲမလဲ ဗလာသက်သက်။ “တောက် .. သောက်ကမြင်းမတွေ ။ဘယ်ချောင်မှာ သွား သေနေသလဲ မသိဘူး ” ငရှဥ့်တောင်းများကိုချကာ မေတ္တာပို့ရင်း မြောင်းဘေးနားတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်နေမိသည်။ ခုတော့ သမီးလေးအတွက် ကျောင်းစရိတ် မဆိုထားနှင့် နောက်နေ့အတွက် ဟင်းစားတောင် မပါနိုင်ဖြစ်ချေပြီ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အရက်ခိုး မပြေတပြေလေးနှင့် လမ်းထိပ်က ကင်းတဲအပျက်တွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်မှေးနေသော ကိုဘမောင်တစ်ယောက် ဟိုအဝေးတခေါ်လောက်မှ အလင်းတန်းတစ်ခုကြောင့် နိုးလာပြန်သည်။ အိပ်မှုန်စုံဝါးဖြင့် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၆လမ်းထိပ် ဆရာဝန်မလေးဆေးခန်းစီမှ မီးအလင်း။ ညဦးပိုင်းမီးပျက်တာမို့ မီးပိတ်ဖို့မေ့သွားသည့်ပုံရပြီး ယခုမီးလာသောအခါမှ ထိုဆေးခန်းကလေး အနောက်ဘက်ပိုင်းရှိ ပေါက်ပြဲနေသောထရံမှ မီးရောင်တို့က အပြင်သို့ လျှံထွက်လာနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆေးခန်းဆီသို့ ကိုဘမောင် လှမ်းငေးလိုက်ရင်း ဆရာမလေးမျက်နှာကို မြင်ယောင်မိသည်။ ၀၀ပုပု အသားအတော်ညိုသော ယောက်ျားမဆန်ဆန် ထိုဆရာမလေးက သူတို့လိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တွင် ဆေးခန်းလာဖွင့်ခဲ့တာ သုံးနှစ်သုံးမိုးကျော်ခဲ့ပြီ ထင်သည်။
စီးပွားရေးကျပ်တည်းလွန်းလှသဖြင့် ဘယ်အရာမဆို အကြွေးနှင့်မကင်းနိုင်ကြသော ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများအဖို့ ဆရာဝန်မလေးထံတွင်လည်း အကြွေးဖြင့်ဆေးကုကြရသဖြင့် ဆရာမလေးမှာလည်း ဒီနှစ်ပိုင်းတွင် အတော်လေး ခက်ခဲသည်ထင်သည်။ ဓနိမိုးထရံကာ သူ့ဆေးခန်းက အခြားလူနေအိမ်များနှင့်အပြိုင် ကြယ်မြင်လမြင်ဖြစ်နေပေမယ့် ၀ါခေါင်လရောက်သည့်တိုင် မပြုပြင်နိုင်ရှာသေး။ အရင်ဖွင့်ခဲ့သော ဆေးခန်းများမှာ ရေရှည်မမြဲနိုင်ကြတာမို့ ယခုနှစ်များတွင် အနစ်နာခံခဲ့သော ဆရာမလေးကို ရပ်ကွက်မှလူထုက ချစ်ခင်ကြသဖြင့် ဆရာမလေးဆေးခန်း ဘယ်လောက်ပင်မလုံမလဲဖြစ်နေပါစေ ပစ္စည်းများကတော့ အပျောက်အပျက်မရှိ။ နှစ်စဉ် တော်သလင်းလပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့ ကျီးမနိုးပွဲ၌ရောယောင်ကာ သူခိုးများထတတ်သော်လည်း ဆရာမလေးဆေးခန်းကတော့ လက်ရာမပျက်လှ။ ယခုသော်ကား ကိုဘမောင် စိတ်ထဲဝယ် ဥာဉ်ဆိုးကလေးများ ထကြွသောင်းကျန်းပေပြီ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆေးခန်းသို့ မကြာခဏရောက်ဖြစ်ခဲ့သော ကိုဘမောင်က ဆေးခန်းတွင်း ဘာပစ္စည်းများ ရှိနေသည်ကို သိတာမို့ အိမ်မှအပူမီးများ ခဏတဖြုတ်လောက် ငြိမ်းလိုငြိမ်းငြား စွန့်စားလိုက်ချင်သည်။
ငါးရှဉ့်တောင်းများကို ကင်းတဲဟောင်းဘေးတွင် အသာဖွက်ထားခဲ့ကာ ယမကာတန်ခိုးနှင့် တားမရသောစိတ်တို့ဖြင့် ဆေးခန်းလေးရှိရာသို့ ကိုဘမောင် လှမ်းလာခဲ့လိုက်သည်။ ဘေးဘီကိုတချက်အကဲခတ်ပြီး ဆေးခန်းအနောက်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံးထရံပေါက်ကို ကာထားသော ပျဉ်ပြားကိုဖယ်ကာ အသာလေးတိုးဝင်လိုက်သည်။ ဆေးခန်းတွင်း တောင်တောင်အီအီ အမြန်ကြည့်လိုက်တော့ ဆေးနှင့်ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများထည့်ထားရာ ဗီဒိုတွေကသော့ခတ်ထားသည်မို့ အပြင်မှဆေးပုလင်းများကိုသာ သူမြင်ရသည်။ သေစာ၊ ရှင်စာသာသာ ဖတ်တတ်သော ကိုဘမောင်တစ်ယောက် ဘယ်ဟာဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် တန်ဖိုးလောက်တော့ ခန့်မှန်းတတ်သည်မို့ အခန်းငှားခပေးရန်၊ မိန်းမဖြစ်သူပူဆာလွန်းသည့် သူ့အမေနားကပ်ပြန်ရွေးရန် မတတ်သာသည့်တိုင် မနက်ဖြန်စားစရိတ်နှင့် သမီးကလေးကျောင်းစားရိတ်အတွက် လုံလောက်မည့်ပမာဏကို တွက်ဆကြည့်လိုက်သည်။ ကြံရာမရ၍သာ လုပ်ရမည့်အလုပ်မို့ ဆရာမလေးကိုလည်း မထိခိုက်စေချင်။ ပစ္စည်းတချို့ကို ဆေးခန်းရှိအိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးနောက် လူနာကုတင်ရှေ့ရှိ အုတ်ခဲစီထားသော မြေပြင်ခနော်ခနဲ့ပေါ်တွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ တွေဝေနေမိသည်။ ဒီအုတ်ခဲစီထားသော မြေပြင်ပေါ်၌ သုံးနှစ်ဆိုသည့်ကာလအတွင်း သူတို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရပ်ခဲ့ဖူးကြသည်။ ရေထမ်းသည့် မောင်သန်းထိန် ၀မ်းလျှောတုန်းကဆို ကိုဘမောင်အပါအ၀င် အိမ်နီးနားချင်းများက စိုးရိမ်ကြီးစွာ ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း ဆေးကုနေသော ဆရာမလေးအား အားကိုးတကြီးဖြင့် ထိုင်ကြည့်ခဲ့ကြဖူးသည် မဟုတ်လား။ ရုတ်စွအဆုံး လင်မယားချင်း မပြောသာမဆိုသာသည့် မိန်းမချင်းကိစ္စများကိုပင် မအေးခင်နှင့်အမျိုးသမီးများက ဆရာမလေးရှိရာ ဒီနေရာလေးသို့လာပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းကြမြဲ။
ဆရာမလေးမှလည်း ဖြူဖြူစင်စင်နှင့်ကူညီကာ အမျိုးသမီးထုအား အားပေးတတ်ခဲ့မြဲ။ သူတို့ရပ်ကွက်အားချစ်ခင်ကာ စေတနာထားခဲ့သော ဆရာမလေးမျက်နှာကို ပြန်မြင်မိပြန်တော့ ထည့်ပြီးသားဆေးပုလင်းများကို ပြန်ထုတ်ကာ နေရာတကျထားမိပြန်သည်။ စိတ်လျှော့ကာ ဆေးခန်းထဲက ပြန်ထွက်မယ်ကြံပြန်တော့ ကျောင်းစရိတ်အချိန်မှီမပေးနိုင်လျှင် မျက်နှာငယ်ရမည့် ပူတူးမမျက်နှာကို အာရုံထဲမှာမြင်ယောင်ရင်း စိတ်မပြတ်ဖြစ်ရပြန်သည်။
၂၆ ရပ်ကွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ တုံးမောင်းခေါက်သံကို ကြားနေရပြီမို့ သက်ပြင်းမျဉ်းမျဉ်းချရင်း ဆရာမလေးသုံးနေကျ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနှင့် ဆေးသွင်းသည့်ပုလင်းကြီးများကိုသယ်ကာ ဆေးခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးကတော့ တိတ်ဆိတ်လို့ ။
" ကိုဘမောင် တကတည်း ရှင့်မှာလည်း သေနေတာ ကျနေတာပဲ ။ ထစမ်းပါဦးတော့ ဒီမှာ သမီးလေး သတိကောင်းကောင်း မရတော့လို့”
ငိုသံပါကြီးနှင့် မအေးခင်အော်နှိုးတော့ အိပ်မှုန်စုံဝါးဖြစ်နေသော ကိုဘမောင်မှာ နေ့နှင့် ညမကွဲချင်။ ကမန်းကတန်းနှင့် သမီးလေးရှိရာသို့ ပြေးကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်ပူက သိပ်မကြီးပေမယ့် ပူတူးမ တကိုယ်လုံး ချွေးစီးများထွက်ကာ ရံဖန်ရံခါတွင် ကယောင်ကတန်း ပြောတတ်ချေပြီ။ အခါတိုင်းလည်း ငါးရှဉ့်ဖမ်းရက်တွေမှာ ညဘက်အလုပ်လုပ်ပြီး တနေကုန် အိပ်တတ်တာမို့ စောစောထ စောစောအိပ်တတ်သော ပူတူးမနှင့် တခါတလေ မတွေ့ရတတ်။ မအေးခင်က သမီးလေးဖျားတာ ၄ ရက်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ ကိုဘမောင်ဒေါသတို့က မိန်းမဖြစ်သူထံသို့ ပုံအောကျမိပြန်သည်။ “နင်က ငါ့သမီးဖျားတာကို သိရဲ့သားနဲ့ ဘာမှမလုပ်ဘူးလား အေးခင်”
“အော် ကျူပ်လည်း ကွမ်းရွက်ပုံ တိုက်ထားပါတယ်တော်။ ဖျားတာနာတာလေးလောက်နဲ့တော့ ဆေးခန်းကို တကူးတက သွားမနေတော့ဘူးလေ။ ဆရာဝန်ကပေးလည်း ဒီဆေးပဲ ကွမ်းယာဆိုင်မှာ သွားစပ်လည်း ဒီဆေးပဲဟာကို။ ပိုက်ဆံက ချွေတာရသေးတယ်ရှင့်၊ ကဲ ကိုဘမောင် ရှင်ငူတူတူကြီးလုပ်မနေနဲ့ အချိန်မရှိဘူး။ ဆေးခန်းသွားမယ်”
“ဆေးခန်း … ဘယ်ဆေးခန်းသွားမှာတုန်း”
“တော့… ဘယ်ဆေးခန်း ရှိရမလဲ။ ကျူပ်တို့ဆရာမလေး ဆေးခန်းပေါ့။ ဟိုမြောက်ပိုင်းက အထူးကုဆေးခန်းကို ကျုပ်က သွားနိုင်မယ်ထင်လို့လား။ အဲလိုသွားရအောင် ရှင်က ကျွန်မတို့ သားအမိကို လူလူသူသူ ထားထားလို့လား”
“တော်တော် အေးခင်မ။ တဆိတ်ရှိ ငါ့ကို ဒီလိုစကားမျိုးပဲ ပြောချင်နေတယ်။ ငါက နင်တို့ သားအမိကိုမကျွေးဘဲ အပြင်မှာ အလေလိုက်နေလို့လား။ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းသလဲ နင်လိုက်ကြည့်ပါလား။ ညဘက် နင်တို့သားအမိ သိုးနေအောင် အိပ်နေတဲ့အချိန် ငါ့မှာတော့ မိုးထဲရေထဲ နင်တို့မျိုဖို့ ရှာဖွေနေရတာတွေ ဘယ်နားသွားထားသလဲ”
“အောင်မယ် ကျွန်မတို့က ဇိမ်ခံရအောင် ရှင့်အိမ်က ဘယ်လောက်တောင် လုံခြုံလို့လဲ။ မိုးရွာရင် အပေါက်အပြဲတွေနဲ့ ကျမတို့မှာ ထိုင်စရာတစ်နေရာ ရဖို့တောင်မနည်း။ တကယ်ဆို မနေ့ညကတည်းက ဆရာမလေးဆေးခန်းကို သွားပြလိုက်ရအကောင်းသား။ ဆရာမလေးဆီမှာ အကြွေးတွေများနေလို့ ရှင်အလုပ်အဆင်ပြေကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီး တစ်ရက်စောင့်နေတာ။ သမီးကလေးကတော့ ညကတည်းက ဗိုက်နာတယ်လို့ပြောသား။ ခုမှတော့ ဆရာမလေးကို တောင်းပန်ပြီး အကြွေးနဲ့သွားပြရမှာ”
မအေးခင်စကားတို့က သူ့တကိုယ်လုံးရှိအားအင်များကို စုပ်ယူလိုက်သလိုမို့ ထိုင်ရာမှပင်မထနိုင်အောင် ပျော့ခွေလို့သွားခဲ့ရသည်။ ဆရာမလေးဆေးခန်းသို့ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနှင့် သွားရမှာပါလိမ့်။ ဘယ်သူမှမသိသည့်တိုင် ကိုဘမောင်မှာ ဆရာမလေးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အင်အားမရှိခဲ့။ ညတုန်းက ရလာသမျှလေးတွေကို ရောင်းချခဲ့စဉ်ကလည်း ဆိုင်မှဈေးနှိမ်သဖြင့် သူရခဲ့သည့်ငွေက မပြောလောက်သာ။ ဆေးခန်းသွားမှ ရမည့်အခြေအနေမို့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို လေးလေးပင်ပင်ချလိုက်ပြီး သူမကိုယ်လုံး ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်ကလေးကိုထမ်းကာ ဆေးခန်းကလေးဆီသို့ ပြေးခဲ့ရပြန်သည်။
ဆေးခန်းရောက်တော့ မိုးရာသီထုံးစံအတိုင်း ဆရာမလေးဆေးခန်းက စည်ကားလို့နေသည်။ အရေးပေါ်လူနာမို့ ရှေ့လူများကိုတောင်းပန်ကာ အရင်ဝင်ပြလိုက်သည်။ လူနာရာဇ၀င်ကိုမေးရင်း ပူတူးမကိုစမ်းသပ်နေသော ဆရာမလေးကိုကြည့်ကာ ကိုဘမောင် ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ။ သွေးလွန်တုတ်ကွေးအပြင်းစားဖြစ်ကြောင်းနှင့် စိုးရိမ်ရကြောင်း ပြောသောအခါ မအေးခင်မှာလည်း ပျာယာခတ်နေချေပြီ။ “ကျွန်မသမီးလေးကို ကယ်ပါ ဆရာမလေးရယ်။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပဲ ကုန်ကုန်ပါ။ ကျမ ဆရာမလေးကို ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်”
သမီးဇောနှင့် ဆရာမလေးကို တိုးလျှိုးတောင်းပန်နေသော မအေးခင်စကားတို့ကို ကိုဘမောင် ကြားတလှည့် မကြားတလှည့်။ သူ့ခါးကြားတွင် ကျစ်ကျစ်ပါအောင်လိပ်ထားသော ပိုက်ဆံခေါက်ကလေးကိုထုတ်ကာ ဆရာမလေးအားလှမ်းပေးရင်း …
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမလေးရယ် ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံနည်းနည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် သမီးလေးကို ကယ်ပါ ဆရာမလေးရယ်”
“ဦးဘမောင် ကျွန်မ ကလေးအတွက် အရေးပေါ်ဆေးသွင်းဖို့ လုပ်ပေးပါ့မယ်။ ပြီးရင်တော့ ဆေးရုံကို လွှဲရလိမ့်မယ်ရှင့်။ ပိုက်ဆံကိစ္စကို မပြောဘဲ နေရအောင်လား။ ကလေးအသက်က အားလုံးထက် ပိုအရေးကြီးနေလို့ပါ”
သွေးပေါင်ချိန်မကောင်းတော့သော ပူတူးမအား ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်မလွှဲခင် ပုလင်းကြီးသွင်းမည်ဆိုတော့ ကိုဘမောင်တကိုယ်လုံး တောင့်တင်းလို့နေသည်။ ထိုပုလင်းကြီးများကို မတန်မရာနှိမ်ဈေးဖြင့် ရောင်း၍ရခဲ့သော ပိုက်ဆံခပ်နွမ်းနွမ်းအချို့ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်လျက် ဆေးခန်းမြေပြင်ခနော်ခနဲ့ပေါ်တွင် ထိုင်ချမိတော့ ညကဖြစ်စဉ်တွေက သူ့အာရုံမှာ အထင်းသားမြင်လာပြန်သည်။ “ဟုတ်ကဲ့… ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ”
ဆရာမလေးနှင့်အဖော်ဖြစ်သူ မာမာတို့က ဆေးသွင်းရန် ဆေးဗူးများကိုရှာပေမယ့် မတွေ့။ အခြေအနေကို ရိပ်စားမိသော ဆရာမလေးက …
“ဆေးပုလင်းတွေလည်း ပါသွားတယ်ထင်တယ် မာမာရေ၊ လူနာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသေးလဲ”
“၈ ယောက်ပါ ဆရာမ”
“အင်း ဒါဆို ဆရာမ ဒီကလေးကို ဆေးရုံလိုက်ပို့လိုက်ဦးမယ်။ အရေးပေါ် ကုဖို့လိုတယ်။ ကဲ ဒေါ်အေးခင် အိမ်ပြန်ပြီး ကလေးအတွက် ပစ္စည်းယူချေ။ ဆရာမ ဟိုဘက်လမ်းထိပ်က ဦးလေးမောင် လေးဘီးကားကိုငှားပြီး ကလေးနဲ့အတူ လာခဲ့မယ်။ ရှင်တို့လမ်းထိပ်က ဖြတ်မှာဆိုတော့ အဲဒီလမ်းထိပ်မှာ ပြန်ဆုံမယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေး ” “ကလေးအဖေက ဒီဓါတ်ဆားရည်ကိုဖျော်ပြီး ကလေး သောက်နိုင်သလောက် တိုက်ပေးပါ။ အခုအခြေအနေက အမြန်ဆုံး အကြောဆေးသွင်းရမဲ့ အခြေအနေပေမယ့် ကျွန်မဆေးခန်းက ညကအဖောက်ခံလိုက်ရလို့ သွင်းရမဲ့ဆေးတွေ တစ်ပုလင်းမှ မရှိတော့လို့ပါရှင်။ ကျွန်မဆေးရုံကို အမြန်ဆုံးပို့ပေးပါ့မယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ .. ဟုတ်ကဲ့”
“မာမာ ဦးလေးမောင်တို့ အိမ်ကိုပြေးပြီး ကားငှား ညီမလေး။ ဆရာမက လူနာကို ဆေးရုံပို့ဖို့ ကားအရေးတကြီး လိုလို့ပါလို့ပြော ဟုတ်ပလား။ မမ ဒီမှာ လိုတာလေးတွေ လုပ်လိုက်ဦးမယ်”
ဦးလေးမောင်၏ လေးဘီးကားအစုတ်ကလေးက စံပြဆေးရုံကြီးသို့ အစွမ်းကုန် ပြေးလို့နေသည်။ ဆေးရုံသို့သွားသောလမ်းက ဝေးလွန်းလှသည်မဟုတ်ပေမယ့် ကိုဘမောင်တို့မိသားစုအတွက်တော့ ကမ္ဘာပျက်မတတ်။ အနေအေးသော ပူတူးမက ခုတော့ လွန်စွာဂျီကျနေကာ ဟိုလိုချီလည်းမကြိုက် ဒီလိုပြောင်းပွေ့လည်းမကြိုက်မို့ အတော်လေး အခြေအနေရှုပ်ထွေးလို့နေသည်။ သူမတကိုယ်လုံးကလည်း ချွေးစေးတွေနှင့် အေးစက်နေဆဲ။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်တော့ ဆရာမလေးက ရောဂါအခြေအနေကိုရှင်းပြရင်း လိုအပ်သည့် ကုသမှုနှင့်ဆိုင်သည့် သူတို့မိသားစု သိသင့်သည်များကို ရှင်းပြနေသည်။ ကုသမှုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော သွေးပေါင်မငြိမ်သဖြင့် ပုလင်းကြီးသွင်းရမည့်အကြောင်းအရာသို့ရောက်တိုင်း ကိုဘမောင်ရင်ကို နောင်တတို့က လာရိုက်ခတ်မြဲ။ သမီးဇောကြောင့်ငိုနေသော မအေးခင်လက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားပေမယ့် ကိုဘမောင်မှာ ပြောစရာစကားတို့ကမရှိ။
ငမိုးရိပ်တံတားကို ဖြတ်လာခဲ့လိုက်စဉ် အမှတ်တမဲ့ အပြင်ဘက်ကိုကြည့်ရင်း ချောင်းရိုးတစ်နေရာမှ ၀င်လုဆဲဆဲ နေလုံးဝိုင်းဝိုင်းကို မြင်လိုက်တော့ ပူတူးမကိုယ်ကလေးအား ခပ်တင်းတင်း ထွေးပွေ့ထားလိုက်မိသည်။ အစစအရာရာ မရှိသလောက်ရှားပါးလှသည့် သူတို့ဘ၀ထဲမှ တစ်ဦးတည်းသောရတနာလေးကို မဆုံးရှုံးချင်ပါ။ သူပြုမိခဲ့သောလုပ်ရပ်များအတွက် သူကိုယ်တိုင်ခံယူဖို့ သတ္တိတို့ရှိနေပေမယ့် သမီးလေးပူတူးမကိုတော့ ဂယက်ကလေးမျှပင် အရိုက်မခံစေလိုပါ။ အချိန်လင့်မှရလာသောအသိတရားက သူ့အားနာကျင်စွာ ခံစားစေရင်း သမီးလေးပူတူးမဘ၀ နေ၀င်ချိန်မစောစေဖို့ ကိုဘမောင်တစ်ယောက်တိုးတိုးလေး ဆုတောင်းနေမိသည်။ ငမိုးရိပ်ချောင်းရေကတော့ အရင်နေ့တွေကလိုပင် နောက်ကျိကျိ။
Display2of2comments	1. 29-10-2009 23:07
aungkyawmoe	2. 26-07-2009 22:56
က ကိုယ့်ကို ပြန်အကျိုး
ပေးတတ်တယ် ဆိုတာ ဒီဝတ္ထုလေးက ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျထ
ဆုဝေ	Display2of2comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	ငမိုးရိပ်ချောင်းနံဘေး နေ၀င်စောချိန်	Saturday, 18 July 2009 16:49	Currently 4.04/5 12345 Rating 4.0/5 (26 votes) < Prev